Mgbe ọ na-abịa n'ụzọ zuru ezu erasing gị iPhone data, nanị ngwá ọrụ na-bụ oru oma ezu iji na-enweta ọrụ mere na izu okè bụ SafeEraser site Wondershare. Ndị ọzọ okwu, Wondershare SafeEraser-enye gị ohere ihichapu niile gị data gị iPhone, si otú kwe gị pụrụ ekwentị gị anya enweghị ihe ọ bụla egwu gị mwute ozi ịlụ gụrụ n'enweghị ikike ndị mmadụ.
Olee otú ihichapụ kpam kpam data si iPhone na nzọụkwụ
Iji wepụ gị data gị iPhone na-adịgide adịgide, ị pụrụ ịgbaso ntụziaka e nyere dị ka n'okpuru:
Jiri n'elu njikọ ibudata ziri ezi version nke Wondershare SafeEraser ka kwa gị na kọmputa.
Wụnye SafeEraser na PC gị na-eji mgbe nile nwụnye usoro.
Ozugbo mere, abụọ-pịa shortcut icon ẹkedori SafeEraser.
Jiri USB data USB jikọọ gị iPhone ka PC.
Chere ruo mgbe Wondershare SafeEraser installs achọrọ ọkwọ ụgbọala maka gị iPhone.
Ozugbo ihe niile bụ ihe zuru ezu, si akpa interface, pịa ihichapu niile Data button (nọchiri anya Nchicha n'elu a mobile ihuenyo nnọchianya).
Na-esote window, pịa Ọkara njikọ (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ hyperlink na bụ ugbu) si Security Ọkwa ngalaba.
Site meghere Ntọala window, pịa iji họrọ High bọtịnụ redio ime ka ehichapu data irrecoverable. (Nkume ntọala emebibeghị ma ọ bụrụ na High na-ama họrọ).
Back na aga window, na dị ubi, ụdị ihichapụ.
Na ala, pịa ihichapu Ugbu a na-amalite data erasure usoro na gị iPhone.
Nso Wondershare SafeEraser mgbe mere.
Malitegharịa ekwentị gị iPhone.
Ndị ọzọ Key Akụkụ Wepụta site Wondershare SafeEraser
Na mgbakwunye na erasing niile data gị iPhone, Wondershare SafeEraser nwekwara ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma isi atụmatụ-ekwe ka ị cleanup ekwentị gị ma melite ya ịrụ ọrụ na ngwa na ụzọ dị mfe. Atụmatụ ndị a awa site Wondershare SafeEraser bụ:
Ihichapu ehichapụ faịlụ - Nke a na-enyere gị na-adịgide adịgide-ebibi ehichapụ faịlụ otú ha agaghịkwa na-recoverable ọbụna site na iji ihe ọ bụla siri ike data mgbake ngwá ọrụ.
Space nchekwa - Nke a-enye gị ohere mpikota onu oyiyi nile echekwara na gị iPhone si nchekwa. Dị otú ahụ na abịakọrọ oyiyi, ọzọ disk ohere a tọhapụrụ elu na i nwere ike iji ọzọ na nzube.
1-Pịa nzacha na mkpocha - Nke a mma-enye gị ọcha niile junk faịlụ na ejibeghi ngwa site gị iPhone onwe elu a ezigbo ego nke ohere nchekwa.
Atụmatụ maka Idebe Your iPhone Clean
E wezụga erasing niile data gị iPhone iji Wondershare SafeEraser, ị kwesịrị ị na-na-gị iPhone ọcha n'ebe junk data nke mere na ị na-adịghị na-ehichapụ ya niile na ebe nchekwa na akpa ebe. A ole na ole Atụmatụ ahụ nwere ike inyere gị aka na a na-ekwu bụ:
Mmechi meghere égwu
Ọ bụrụ na ị restarted gị iPhone a na mgbe na meghere ọtụtụ ngwa ọdịnala na egwuregwu kemgbe ikpeazụ Malitegharịa ekwentị, na meghere omume na-erepịaghị a bukwanu ego nke ebe nchekwa na n'ịwa a otutu junk faịlụ mgbe na-agba ọsọ na ndabere. Mmechi dị otú ahụ omume mma na arụmọrụ nke gị iPhone. Ị nwere ike abụọ-pịa Home button, na enweta na swipe onye ọ bụla nke gosipụtara oyiyi elu na-emechi ya kwekọrọ ekwekọ ngwa na-agba ọsọ na ndabere.
Nhicha Nchọgharị History na weebụsaịtị Data
Ọ bụrụ na ị na-eji gị iPhone ukwuu maka weebụ nchọgharị ma na-eme ndị ọzọ online aga-eme, ọ dị mkpa na ị na-nhicha ahụ nchọgharị akụkọ ihe mere na website data site na ekwentị gị na-echeta. Anya isi na ị na-eji nanị Safari na gị iPhone, ị pụrụ ime otú site na ịga na Ntọala> Safari> Clear History na weebụsaịtị Data> Clear History na Data. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ihe ọ bụla ọzọ nchọgharị weebụ arụnyere na ekwentị gị na ị na-eji ya maka Farisii nakwa, i nwere ike mkpa iji na-eso kwesịrị ekwesị usoro ikpochapụ ya akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ na junk data gị iPhone si ebe nchekwa.
Iwepu ngwa ọdịnala na Games
Ọtụtụ-atọ ndị ọzọ ngwa ọdịnala na gị iPhone ịnọgide ejibeghi n'ihi na ogologo oge na ụfọdụ n'ime ha na-eleghị anya, mgbe eji na niile. Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na wepụ dị otú ahụ ngwa ọdịnala site na ekwentị gị onwe elu ụfọdụ ohere nchekwa. Ọzọkwa, mgbe ụfọdụ, arụnyere egwuregwu na mgbe nile na-eji ngwa ike junk data na gị iPhone si nchekwa. Iwepu na mgbe ahụ reinstalling dị otú ahụ apps / egwuregwu na-eme ka elu a bukwanu ego nke ohere na ekwentị gị. Ị nwere ike wepu apps / egwuregwu gị iPhone site na ịga na Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji> Jikwaa Nchekwa, na mgbe ahụ tapping na ejibeghi na ngwa na tapping na Nhichapụ App bọtịnụ.
Erasing All ọdịnaya na Mwube
Ọtụtụ mgbe, ị pụrụ imesị inwe a n'ụzọ zuru ezu messed elu iPhone na nnukwu ego nke junk data na unmanageable ntọala na ị gaghị aghọ azụ ndabara. Dị otú ahụ ọgbaghara bụkwa maka oriri nke nnukwu ego nke disk ohere na gị iPhone. Resetting niile ọdịnaya na ntọala gị iPhone mfe na-eme ka ahụ ohere na-enye gị ohere ahu nagide ya nchekwa optimally. Ị nwere ike tọgharịa ọdịnaya na ntọala gị iPhone si Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu All ọdịnaya na Ntọala> ihichapu iPhone.
Iji Third-Party Disk Management Ngwaọrụ
I nwekwara ike iji ihe ọ bụla oru oma-atọ ndị ọzọ disk, nchekwa, na batrị management ngwá ọrụ dị ka Wondershare SafeEraser na batrị Doctor na-eji kwesịrị ekwesị usoro ọcha ahụ disk ohere na-ebuli oriri batrị gị iPhone.
Ọ bụ ezie na ọ dị mfe na-eme, nhicha niile data gị iPhone kwesịrị iwere dị ka ikpeazụ resotu mgbe-eche echiche nke rụọ ịrụ ọrụ ekwentị. Ụzọ ndị ọzọ dị ka nhicha web data na-eme nchọgharị akụkọ ihe mere eme, compressing echekwara data, na-emechi ndabere ngwa, ma ọ bụ ihichapụ na ejibeghi omume si gị iPhone e kwesịrị mkpa iji nọgide na-enwe ike n'ezi ihe nke ozi gị na izere eme mberede data ọnwụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na erasing niile data gị iPhone-aghọ oké mkpa, ịdabere na a tụkwasịrị obi ngwá ọrụ dị ka Wondershare SafeEraser ga-gị mma nzọ.
> Resource> Clean-elu> Olee otú ị na Doro Anya All Data site na iPhone
Copyright © e Wondershare. Ikike niile echekwabara.